Ny rano mangatsiaka
Nahoana no maro ny olona mandalona rano fisotro madio noho ny rano
Ny fitrandrahana rano fisotro madio dia tsy mitovy amin'ny fofona amin'ny sira. Raha ny marina, betsaka kokoa ny olona mandatsaka rano madio noho ny sira. Manodidina ny 90 isan-jaton'ny rotsak'orana dia miseho amin'ny rano mangatsiaka, toy ny dobo filomanosana, fandroana fandroana ary renirano. Izany no anisan'ny antony mahatonga ny simia amin'ny rano sy ny fifandraisan'ny osmôs . Ity ny fomba fiasany.
Mandrobona ao Saltwater
Ny filomanosana dia miteraka fahosana mandritra ny rano. Tsy mila miaina ao anaty rano ianao noho izany, fa raha tsy mitete rano sira ianao dia manakana ny rano tsy hivezivezy ao anaty tavy ny làlan-kase.
Raha mandatsaka rano anaty sira ianao, dia matetika satria tsy afaka mahazo oksizenina ianao na handroaka gazy karbonika. Ny fihinan'ny rano sira dia toy ny sakana ara-batana eo amin'ny rivotra sy ny havokavoka. Raha azo esorina ny rano sira, dia afaka miaina indray ianao.
Na izany aza, tsy midika izany fa tsy hisy ny fiantraikany maharitra. Ny rano sira dia hidradradradra amin'ny lozam-pifamoivoizana ao amin'ny efitrano ho an'ny havokavoka, ka ny rano avy amin'ny rànao dia miditra ao amin'ny havokavoka mba hanonerana ny fahasamihafana. Mihamahia ny ranao ary mampihetsi-po ny rafi-pandehanao . Ny adin-tsaina ao am-ponao dia mety hitarika amin'ny fisamborana olona 10 na 10 minitra. Ny vaovao mahafaly dia hoe, mora kokoa ny manasitrana ny ranao amin'ny rano fisotro, ka raha tafavoaka velona amin'ny traikefa voalohany ianao, dia eny amin'ny làlana mankany amin'ny fahasitranana.
Mamafy rano madio
Afaka maty ianao amin'ny fofona rano madio na dia ora vitsy monja aoriananao aza tsy alatsaka any anaty rano! Izany dia satria ny rano madio dia "manamaivana" kokoa ny fihanaky ny ion noho ny ranoka ao anaty efitranonao.
Ny rano madio dia tsy miampita ao amin'ny sela hoditrao satria keratin tena manala azy ireo, fa ny rano dia mihazakazaka mankany amin'ny efitrano tsy misy proteinina mba hanandrana hampihena ny haavon'ny tsimokaretina manerana ny tranoben'ny sela. Mety hiteraka fahavoazana goavam-be izany, ka na dia nesorina tao amin'ny havokavoka aza ny rano, dia mety tsy ho sitrana ianao.
Ity no zava-mitranga: Ny rano madio dia mitovy amin'ny tavy lung. Rehefa miditra ao anaty sela ny rano, dia mitelina azy ireo. Mety hipoaka ny sasany amin'ireo cellules lung. Satria mipoitra amin'ny rano madio ny kapila ao amin'ny havokavoka, miditra ao anaty rà ny rano . Manala ny ranao izany. Nipoitra ny sela ( hemolysis ). Ny plasma k + ambony (ionioma potasy) sy ny kanseran'ny Na + (ionio) dia mety hanakorontana ny fo ao amin'ny fo, ka miteraka fibrillation. Ny fisamborana kardia avy amin'ny tsy fitoviana eo amin'ny ion dia mety hitranga ao anatin'ny 2 ka hatramin'ny 3 minitra.
Na dia tafavoaka velona tamin'ny minitra vitsy aza ianao, dia mety hitranga amin'ny fihenan'ny hemôglôbinina amin'ny rà ao amin'ny voa fantatrao ny tsy fahampian-tsakafo. Raha mandatsaka rano mangatsiaka ianao, dia mety hihena ny ao am-ponao mba hampisy hala-moka amin'ny hipotera. Etsy andaniny, amin'ny rano sotro, tsy mangatsiaka ny rano mangatsiaka ao anaty raozy, ka ny hany voka-dratsiny dia voafetra amin'ny fahavoan'ny hafanana eo amin'ny hoditrao.
PH, pKa, Ka, pKb, ary Kb Hazavaina
Ahoana no hamaritana ny isan'ireo proton sy elektrôna amin'ny ion?
Afaka misotro rano voadio ve ianao?
Androany aho dia nianatra tamin'ny siansa (TIL)
Famaritana, karazana ary fampiasana
Fanontaniana momba ny fanandramana momba ny fitiliana ara-tsakafo
Inona no fanoherana faharoa?
Fahadisoan'ny ratsy indrindra amin'ny filma
Ahoana ny fomba hanaovana afo mirehitra (mametraha fanontaniana)
The Best Quotes Pro-Choice
Miala ny ranomandry! Miala ny ranomandry!
Fanamafisana fahasamihafana ny fitondràna tsy mifanaraka na hafa
Ny Flying B: Tantaran'ny Bentley Vehivavy
Fiara Ugliest an'ny faran'ny taompolo dimy
Dingana amina dingana: ahoana no fomba hanovana ny volan'ny milina moto
Florida Cop Killer Shot 68 Times Mitarika Ny Fanondranana Trafika sy Famonoana Aina
Famaritana ny Molarita amin'ny Chemistry
Fantaro ny Russ Taff
Hitady ny y-interception amin'ny Parabola
Fotoana momba ny fampiharana any amin'ny sekolim-pitsaboana
Fampidirana ny Bokin'i Titosy
Ny bokin'ny Andron'ny reny sy ny asa famoahana ny Andron'ny reny
Aretotle's Tragedy Terminology
Martin Luther King, ny tsy Fahampiana ary ny Veganism
Zava-dehibe sy Eras amin'ny tantaran'ny Amerikanina
Inona ireo ireto madinika ireto?
Profile of Charles "Tex" Watson ao amin'ny fianakaviana Manson
Teny nalaina nataon'i Mark Twain momba ny Finoana
Fomba hanombanana ny fiasan'ny mpiasa ao amin'ny kilasinao
1998 British Open: O'Meara de Champ Via Playoff